Jadon Sancho Oo Ka Degay Xerada Tababarka Manchester United
By axadle Last updated Aug 2, 2020
Manchester United ayaa kusii dhowaanaysa saxeexa xiddiga da’da yar ee reer England ee Jadon Sancho garabka weerarka uga ciyaara Borussia Dortmund, kaas oo la wariyey inuu xarunta tababarka Red Devils ee Carrington booqday.
Pirlo Iyo Shaqada Ku Sugeysa Juventus, Laba Arin Xal Ayay U
20 jirna oo ay kooxdiisu ku xidhay £100 milyan oo Euro, ayaa la sheegay inuu hore u booqday xarunta tababarka ee Red Devils oo uu ku qaatay waqt9i kooban, xilli ay sii kordhayaan wararka ku xidhiidhinaya Red Devils oo uu isaguna doonayo inuu ku biiro.
United ayaa rajaynaysa inay xiddigan da’da yar hor dhigto dalab lacag badan oo ku helayo si uu ugu cadaadiyo kooxdiisa in aanay ka gaws-adaygin inay aqbasho dalabka Manchester United, isla markaana uu noqdo saxeexa ugu weyn ee Red Devils ee xagaagan.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa bartilmaameedkiisa koowaad ee suuqa xagaagan ka dhigtay Sandho oo uu rumaysan yahay inay ku jirto tayada kooxda gaadhsiin karaysa heerka Man City iyo Liverpool, saamayn weyna uu yeelan doona sida Bruno Fernandes uu khadka dhexe u nooleeyey oo kale.
Anthony Martial iyo Marcus Rashford oo afka hore uu ku dardar geliyey Mason Greenwood oo safka koowaad kula soo biiray xili ciyaareedkan, ayuu tababaraha reer Norway aaminsan yahay in haddii Sancho uu kusoo biiro ay kooxdiisu noqon doonto mid ay adag tahay in la qabto.
In Manchester United ay heshiis shaqsi ah la gaadho 20 jirkan ayaan wax weyn lahayn, maadaama uu doonayo inuu kusoo laabto horyaalka Premier League oo uu saddex sannadood ka maqnaa, waxaana niyad-samaanta badan siisay in Sancho uu ka degay xarunta tababarka United, waqtiyadii uu joogay Manchester City iyo xilliyo kale oo uu ku sugnaa Borussia Dortmund intaba.
Sancho oo ay la socdaan Angel Gomes iyo DJ Buffonge ayaa xerada tababarka Manchester United booqday, waana sababta ay Red Devils kalsoonida ugu qabto in heshiis ay la gaadho laacibkan aanu ku adkayn, laakiin ay caqabaddu tahay Dortmund oo ku adkaynaysa qiimaha oo gaadhsiisay illaa £120 milyan oo Gini.
Si kastaba ha ahaatee, United ayaa kusii dhowaanaysa saxeexa Sancho, waana kooxda kaliya ee ay suurtogalka tahay inay bixiso lacagta ay kooxda reer Germany ku xidhay, taas oo xilli horeba tartanka ka saartay kooxihii kale ee kula tartamayay ee ay ka midka ahayd Liverpool.
‘Severe accidents’ after educate derails,…